Global Voices teny Malagasy » Fanafihana ny tranonkalan’ny Vaomieran’ny fifidianana tao Pakistana · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 04 Avrily 2019 4:46 GMT 1	 · Mpanoratra Hisham Almiraat Nandika Liva Andriamanantena
Sokajy: Pakistana, Mediam-bahoaka
Voalaza fa nisy nipiraty ny Zoma 29 Martsa 2013 ny tranonkalan'ny  Vaomieran'ny fifidianana ao Pakistana. Araka ny tranokalam-baovao tao an-toerana The Express Tribune , ” nipiraty ny pejy fandraisana [ny mpijirika Indiana iray] ary inoana fa nanimba ny fisiany ho an'ny mpitsidika.” Tsy mazava ny antony nitarika ity vohikala ity hamantatra ny zom-pirenan'ilay mpanafika.
Ny asabotsy, raha niditra ny andro faharoa ny fanafihana dia nanapan-kevitra ny Vaomiera misahana ny fifidianana fa hamindra ny tranonkalany ho any amin'ny lohamilina hafa. Nilaza tamin'ny Geo News  ny loharanom-baovaon'ny ECP fa voaaro ny angondrakitra rehetra mifandraika amin'ny fifidianana na dia eo aza ny fanafihana.
Nilaza tamin'ny The Express Tribune  ny manam-pahaizana momba ny aterineto raha nanontaniana momba ny natioran'ny fanafihana ny tranonkalan'ny ECP fa mety nisy hifandraisany tamin'ny fanafihan'ny Spamhaus , ilay fanafihana DDoS (Distributed Denial of Service ) lehibe indrindra izay mikendry ny fifanakalozam-baovao lehibe manerantany izany ka mampiadana ny fifamoivoizana an-tserasera any Eorôpa sy Amerika Avaratra.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2019/04/04/136767/
 fanafihan'ny Spamhaus: http://www.nytimes.com/interactive/2013/03/30/technology/how-the-cyberattack-on-spamhaus-unfolded.html?_r=0